Ahụmahụ Semalt: Ole Ogologo Ogologo Nnyocha A Ga - aga n'ihu na SEO
Nchọpụta isiokwu, nke bụ akụkụ dị mkpa nke mgbasa ozi SEO ọ bụla,adịwo adị ruo ọtụtụ afọ. Otú ọ dị, n'oge afọ ole na ole gara aga, nyochaa isiokwu dị iche iche anọwo na-enwe ọtụtụ mgbanwe. Mgbe ụfọdụmgbanwe ndị a dị oké mkpa, mgbe ụfọdụ, ha adịghị mkpa. N'ọnọdụ ọ bụla, ọdịdị na-adịghị mma nke usoro a na-abata ajụjụ ahụMmetụta nke nchọpụta isiokwu maka SEO.
Jack Miller, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, nyochaa ihe ndị ahụ, nke ugbu a na n'ihu ga-akọwa mkpa nchọpụta isiokwu.
Keywords dị mkpa na SEO n'ihi na ha na-egwu egwuọrụ na-enyere gị aka ịchọta site na ajụjụ gbara ajụjụ dị iche iche. Nnyocha nchọpụta na-enye gị ohere ịchọta isiokwu ndị na - enye gị:
Okporo ụzọ dị elu. Ị ga-enweta ndị ọbịa ọhụrụ n'ihi na ịE depụtara saịtị na nchọta ọchụchọ.
Ihe dị mkpa. Nchọgharị niile na-abata ga-emetụta iheị na-enye na ma ọ na-emeju ndị ọrụ gị na-abata n'ime afọ ojuju.
Ngwá Agha Dị Ala. Ọ bụrụ na i nwere isiokwu ndị ziri ezi, yanke pụtara na ị gaghị arụ ọrụ oge ọzọ iji kwado maka ajụjụ ị họọrọ.
Na mmalite nke nyocha ọchụchọ, njikarịcha na-echeị na-etinye ha n'ime ihe niile ị na-enwe na mkpado meta ọ bụla i nwere ike. Site na Google Analytics, Google na-egosiputa ọtụtụnke ozi gbasara otu ndi mmadu na - acho ihe omuma na weebụ na otu esi achota okwukwa gi site na asusu..Ozugbo i nwerendepụta a nke oke okporo ụzọ na mkparịta ụka dị ala, ị nwere ike ebuli saịtị gị ozugbo maka ajụjụ ndị a. Imirikiti ajụjụ nke Googlenwere njikọ nke otu onye na-achọpụta na ha ga-ewere okwu gị ma ọ bụ okwu gị ma chọpụta akara dị oke ma ọ bụ kpọmkwem na nkebi okwu ndị ọzọna okwu na weebụ.
N'afọ 2013, Google wepụtara mmelite mara dị ka Hummingbird, nkegosipụtara echiche nke "nyocha ọchụchọ". Mmelite a agbanweela otú otu nyocha ahụ si arụ ọrụ ajụjụ ndị na-abata. Kamana-eduzi nchọpụta doro anya nke onye ọrụ chọrọ, mmelite a nyere Google aka ịghọta ihe kpatara ebumnuche onye ọrụ. Na uru ihu,nke a yiri obere ngbanwe, ma o mere ka nnukwu mmetụta dị iche iche nyocha ndị nyocha na-eleba anya na isiokwu.
Nwelite a agbanweela SEO ọ bụghị naanị n'okwu nkebi okwuna isiokwu. Taa, ọ ga-ekwe omume ịkwado elu maka mkpụrụokwu okwu na okwu, nke ị naghị ebuli elu, ị nwekwara ikenweta ogo maka okwu na ahịrịokwu ndị na-adịghị ọbụna na ibe gị. A na-akpọ okwu ndị a dị ka Long-tail Okwu Kpọrọgwụ. Ha nwereka Hummingbird mara ya ma mee ka ndị ahịa na-achọ okwu ndị na-adịchaghị ala na ndị na-adịghị asọmpi. Ọ pụtara na kama ịtụkwasịKeywords, ụlọ ọrụ kwesịrị ịmalite iwunye ọdịnaya gburugburu otu mkpụrụokwu ma ọ bụ ahịrịokwu ọ bụla mgbe ị na-elekwasị anya na isi okwu.
Mkpuchi nke Google
Ntuchi mkpirisi nke Google malitere site na Google Analyticsma nke a anọgidewo na AdWords. Nke a pụtara iji gbaa ndị mmadụ ume ka ha jiri mgbasa ozi ha kwụrụ ụgwọ wee kwatuo ya mgbe ha nwetasịrị ngwa ngwa.N'eziokwu, ọ na - aghọkarị ihe dị mkpa nye ndị ahịa kama ịmepụta atụmatụ atụmatụ kachasị mma.
Tinyere ihe niile e kwuru n'elu, anyị kwesịrị ịghọtankà na ụzụ ọhụrụ ahụ na-abanye n'ime egwuregwu, dịka ọmụmaatụ, dịka o mere na ndị enyemaka dịjitalụ dika Cortana na Siri. Ọ na-agba ndị mmadụ umenyocha ọchụchọ mkparịta ụka, nke na-agbanwe egwuregwu ahụ kpamkpam. Ihe mejupụtara, eziokwu na ihe omimi a ga-agbanwekwandị mmadụ na-achọ na otu usoro usoro ogo si arụ ọrụ. N'ọtụtụ mgbanwe a na-atụ anya na ọ ga-abanye na ya, nchọpụta isiokwu agaghị adị n'otu,ma ọ gaghị eme ka ọ daa mbà. Nke a ga-abụ ngbanwe dị nwayọ n'ime usoro ọchụchọ ọhụrụ Source .